I-Nokia Gamesa iyawa kwimarike yemasheya | Ezezimali
I-Nokia Gamesa iyawa kwimarike yemasheya
Kunqabile ukhuseleko luxatyisiwe okanye lwehlisiwe kwiimarike zemali ezingaphezulu kwe-15%, njengoko isisiganeko esikhethekileyo. Ewe, le yinto eyenzekileyo kwezi ntsuku ngeNokia Gamesa kushiyeke ngaphezulu kancinci kwe-15% kwiseshoni enye yorhwebo. Ngokuchanekileyo ngexesha apho yayilelinye lamaxabiso asezantsi kakhulu kwisalathiso esikhethiweyo sezabelo zaseSpain, i-Ibex 35. Ukuya kuthi ga kwinqanaba lokuba uxinzelelo lwayo lokuthelekisa lwalungenye yezona zinamandla kurhwebo. Ukuba phantse yonke imihla kukhokelela ekuzuzeni kwizikwere zikazwelonke.
Kodwa eyona nto ibangele le ntlekele iyonke kufuneka ifumaneke kwiziphumo zeshishini eziphoxe kakhulu iiarhente zeemarike zezabelo. Abayichonganga into ebebeyilindele kwaye ngenxa yesi sizathu impendulo ye-Nokia Gamesa ibinogonyamelo olunje. Umtyalomali otyale i-10.000 euros uya kube eyibonile indlela ngosuku olunye nje ziye zonyuka ngaphezulu kwe-1.500 euro oko kuthetha ukuba yimali eninzi kolu hlobo lomsebenzi. Nangona eyona nto imbi inokuba yenzeke ekuqaleni kweeholide zika-Agasti.
Ngelixa kwelinye icala, iNokia Gamesa yayilelinye lezokhuseleko kunye Inani elikhulu lezindululo ngabahlalutyi kwiimarike zezabelo. Yayilulungelelaniso kuwo onke amachibi kwaye ngoku kuza le meko intsha inokutshintsha umbono wabatyali mali abancinci nabaphakathi. Kodwa inyani kukuba izinto azijongi kakuhle kakhulu kwimidla yenkampani edwelisiweyo. Ukuba akunjalo, ngokuchaseneyo, ukwehla okutsha kunye okukhulu kwixabiso lezabelo kunokuveliswa.
1 I-Nokia Gamesa: kwii-euro ezingama-12
2 Hlisa incwadi yoku-odola
3 Izivumelwano ezintsha phesheya
4 Idityaniswe kwimijikelezo yeshishini
5 Ukuphoxeka kwiziphumo
6 Ityala elipheleleyo le-191 yezigidi ze-euro
I-Nokia Gamesa: kwii-euro ezingama-12
I-Siemens Gamesa Amandla aVuselelekayo, ngaphambili i-Gamesa Corporación Tecnológica y Grupo Auxiliar Metalúrgico, sisizwe saseSpain esinobuchwepheshe obutsha obunikezelwe kumandla omoya. Emva kokupapashwa kweziphumo zeshishini, izabelo zayo ziye zehla zaya kufikelela kumanqanaba malunga nee-euro ezingama-12. Kodwa eyona nto ibaluleke kakhulu kukuba ibethe phantsi izixhaso ezibalulekileyo ezinokuthi zitshintshe indlela ezihamba ngayo, ubuncinci ngokubhekisele kwixesha elifutshane nelide. Ukuhamba ukusuka kwi-bullish ukuya kwi-bearish kwiintsuku ezimbalwa kakhulu. Ukuba ngummangaliso wokwenene kwinxalenye elungileyo yabatyali mali abancinci nabaphakathi.
Akunakulityalwa ukuba kwiintsuku nje ezimbalwa ezidlulileyo, eyona nto yayijolise kuyo yiNokia Gamesa yayiyi-18 okanye ii-euro ezingama-20 ngesabelo ngasinye. Kwaye kwabonakala kunokwenzeka ukuba angayifumana ngaphambi kokuphela konyaka okhoyo. Apho ukuthengwa bekunyanzeliswa ngekristale ecacileyo kwintengiso. Kunye ivolumu yokugaya ephezulu kakhulu kolu didi lukhethekileyo lwesitokhwe. Ngokubonakala ngokutsha okunokubakho kodwa okunokuphelelwa lixesha ngamathemba amatsha enkampani yamandla omoya.
Hlisa incwadi yoku-odola
Eyona nto iphosakeleyo kwaye ethe yathathelwa ingqalelo ngabatyali mali sisiphumo sokuhla okuqhubekayo kwamaxabiso kwincwadi yoku-odola. Kufike njengothusayo kuninzi lweearhente kwiimarike zezabelo. Ukufikelela kwinqanaba lokuba iziphumo zeshishini zeNokia Gamesa ndibaphoxile kakhulu bonke abatyali mali. Nangona ngamandla kungafane kubonwe kwisalathiso esikhethiweyo sezabelo zaseSpain, i-Ibex 35. Sithetha ngento engekho ngaphezulu kwaye akukho nto ingaphantsi kokuhla kwamaxabiso nge-16%.
Enye into ethe yakwazi ukuphembelela le meko yile inxulumene nolindelo olwenziwe ngaphakathi kwenkampani kwaye, emva kwako konke, lwaluninzi. Ngale ndlela, ayinakulityalwa ukuba i-Nokia Gamesa yenye yezo zibalo zesizwe zidwelisiweyo, ngakumbi ngenxa yezinto ezilindelweyo kwixesha elizayo kunokuba yinyani yeendlela zayo zeshishini. Kwaye ke ukungazinzi kwenza ubukho obukhulu ekucwangcisweni kwamaxabiso akho. Into exhaphake kakhulu kule klasi yeenkampani kwezi mpawu kwaye inokukhokelela ekubeni ulahlekelwe yimali eninzi endleleni.
Izivumelwano ezintsha phesheya
Emva kokuba iNokia Gamesa ityikitye isivumelwano sayo sokuqala neBrennand Investimentos yokubonelela ngoomatshini bomoya abangama-27 beentlobo ezahlukeneyo zemodeli kwifama zomoya zaseArizona naseHonorato, ezibekwe kwilizwe laseBrazil iBahia. Ukusukela ngo-2012, iNokia Gamesa ibonelele ngaphezulu kwe-3,1 GW (ngaphezulu kweiyunithi ezili-1.500) malunga nayo Iiprojekthi ezingama-60 eBrazil. Inkampani inobukho obuzinzileyo kweli lizwe, apho ineeofisi kunye nomzi mveliso wenacelle, kunye nokunikezela ngeenkonzo zokusebenza kunye nokugcinwa.
Ezi yayiziindaba nje ezikhuthaze icandelo elilungileyo leenkampani ezincinci neziphakathi ukuba zenze ukuthenga ngeli xabiso ukuze imisebenzi yazo ibe yinzuzo. Kodwa babonile ukuba kwisithuba esifutshane kakhulu sexesha izikhundla zabo zitshintshe kakhulu. Kude kube bacinga ukuthengisa izabelo zabo. Nangona elona khondo lobulumko lezenzo ngalo mzuzu thula kwaye ulinde ukubona okwenzekayo kwiintsuku ezimbalwa ezizayo ukwenza isigqibo esifanelekileyo kwimeko nganye. Ngayiphi na imeko, inye into icacile kwaye yile yokuba umbono we-Nokia Gamesa utshintshile kwaye kwimeko apho akuyi kubakho khetho ngaphandle kokuphuhlisa utshintsho kwisicwangciso sotyalo-mali.
Idityaniswe kwimijikelezo yeshishini
Olu luhlobo lwexabiso olubonakalisiweyo kuba linxibelelene ngokusondeleyo nemijikelezo yezoqoqosho. Ngamanye amagama, zisebenza kakhulu kumaxesha abanzi ngelixa, ngokuchaseneyo, ezona zilungiso zinkulu zenzeka ngamaxesha okudodobala kwezoqoqosho. Ngesi sizathu kunokuthiwa ziinkampani ithathwa njengethutyana kuba baxhomekeke kwimeko yezoqoqosho lwamanye amazwe. Ngaphandle kokunye ukuthathelwa ingqalelo kobuchwephesha bendalo kwaye mhlawumbi nakwindawo yokujonga izinto ezisisiseko. Ukuya kwinqanaba lokuba kunzima kakhulu ukusebenza nolu didi lwezokhuseleko kwimarike yemasheya.
Enye into ekufuneka kujongwane nayo kukuba ayenzelwanga kutyalo-mali lwexesha eliphakathi nelide. Ukuba akunjalo, ngokuchaseneyo, zingaphezulu zijolise kwimisebenzi emifutshane kakhulu kwiimarike zezabelo. Ukuthatha inxaxheba kwiintshukumo eziya phezulu ukugqibezela izikhundla phantsi kwaso nasiphi na isicwangciso esenziwe kutyalo mali. Ukuba lelinye lawona maqela aqhelekileyo afanelekileyo kunye nokwahlula kwamanye amashishini okanye amacandelo kwiimarike zezemali. Apho unokufumana khona uhlalutyo olukhulu, kodwa uphulukane nemali eninzi ekusebenzeni kwezikhundla.
INokia Gamesa yaMandla aVuselelekayo (SGRE) namhlanje izise iziphumo kwiinyanga ezilithoba zokuqala (Okthobha-Juni) nakwikota yesithathu (Epreli-Juni) yonyaka-mali wayo (FY) 2019. Kwiinyanga ezilithoba zokuqala zonyaka-mali 2019, ukuthengisa kufikelela kwi-7.283 yezigidi zeerandi (+ 12% y / y). Kwikota yesithathu bonyuke nge-23%, bafikelela kwi-2.632 yezigidi ze-euro, eqhutywa ligalelo elinamandla lazo zonke iiyunithi zeshishini, ngakumbi irekhodi lomsebenzi waselunxwemeni.
Inkampani igqibe iinyanga ezisithoba zokuqala ze-FY 2019 nge-pre-PPA Ebit, indibaniselwano kunye nohlengahlengiso lwe- $ 475 yezigidi, elingana nomda wangaphambi kwe-PPA Ebit, indibaniselwano kunye neendleko zohlengahlengiso lwe-6,5%. Kwikota yesithathu, ibhalise i-pre-PPA Ebit, indibaniselwano kunye nohlengahlengiso lwe-159 yezigidi zeerandi, kunye ne-pre-PPA Ebit margin, indibaniselwano kunye nohlengahlengiso lwe-6,1%. Inkqubo ye- ukwehla okuqhubekayo kwamaxabiso kwincwadi yoku-odola Oku kube yeyona mpembelelo iphambili kwinzuzo, kunye nokungazinzi kwiimarike ezisakhulayo kunye nemiceli mngeni ekuphunyezweni kweeprojekthi ezithile ezingaselunxwemeni.
Ityala elipheleleyo le-191 yezigidi ze-euro
Inkampani iphindwe kabini Inzuzo yakho iye kwi-88 yezigidi yee-euro ngeenyanga ezilithoba zokuqala zonyaka-mali ka-2019, ngelixa kwikota yesithathu ibiyi-21 yezigidi ze-euro. Ityala lilonke limi kwi-191 yezigidi ze-euro ukusukela nge-30 kaJuni, eqhutywa kukonyuka kwemali yokusebenza ebusweni bencopho yomsebenzi kwishishini le-turbine yomoya kwikota yesine. Ukusebenza kwemali kuhambelana nezikhokelo ezinikezelweyo kunyaka-mali we-2019 (ukuthengiswa kwe-10.000-11.000 yezigidi ze-euro kunye nomda wangaphambi kwe-PPA Ebit, indibaniselwano kunye nohlengahlengiso lwe-7% kunye ne-8,5%), nangona ikota yesithathu zachaphazeleka kukungazinzi kwiimarike ezisakhulayo kunye nemiceli mngeni ekuphunyezweni kwezinye iiprojekthi zonxweme.
Nangona i-headwinds yexesha elincinci inefuthe kwimida, imeko ye-Nokia yeMidlalo yexesha elide ihlala yomelele, iqhutywa yincwadi yokurekhoda, ubume bendawo kunye nokwahluka kweshishini, kunye nenye yeepotifoliyo zemveliso ezikhuphisanayo kunxweme nakunxweme. Inkqubo ye- ukwehla okuqhubekayo kwamaxabiso kwincwadi yoku-odola ibe yeyona mpembelelo iphambili kwinzuzo, kunye nokungazinzi kwiimarike ezisakhulayo kunye nemiceli mngeni ekuphunyezweni kwezinye zeeprojekthi zonxweme
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Bolsa » I-Nokia Gamesa iyawa kwimarike yemasheya
Ukutyala imali kwiklabhu yegalufa: enye indlela enenzuzo kakhulu